Na-aga. Ihe niile ịchọrọ ga-abịara gị n’oge zuru oke. - Amaghi ama - Quedia Pedia
Na-aga. Ihe niile ịchọrọ ga-abịara gị n’oge zuru oke. - Amaghi ama
Ọ dị mkpa ka ị na-aga. Ọtụtụ mgbe, anyị na-akwụsịtụ ozugbo anyị erutela ọkara. Ekwesighi ime nke a. Mmadu aghaghi inwe ndidi na inwe olile anya site na iche echiche banyere odinihu ma na - igwa onwe gi na ogaghi adi nma.
Maghị mgbe ọrụ ebube na-eme, ọ́ bụghị ya? Ọ bụrụ na ị rutela ugbu a, ịkwesịrị ịkwali onwe gị iji gaa ọtụtụ kilomita ruo mgbe ị ruru ihe mgbaru ọsọ ahụ. Ihe niile ịchọrọ na ndụ gị ga-abịara gị oge niile.
I kwesịrị ịga n’ihu. Ihe ọ bụla ịchọrọ ga-abịakwute gị n’oge kwesịrị ekwesị. Mme n̄kpọ ẹsitịbe nte ẹketịbede. Ọrụ gị bụ ịnọgide na-enwe ike ịdị n'otu, ị ga na-elekwasị anya naanị na nke ahụ!
Cheta na ndị mmeri bụ ndị na-ala nwayọ ma kwụsie ike n'ụzọ ha. Ọ bụrụ n’ịchọrọ imezu ihe ọ bụla na ndụ gị, ị ga-elekwasị anya n’ihe mgbaru ọsọ gị ma nọgide na-aga ya.
Shouldzọ ekwesịghị ịdị larịị mgbe niile. I nwere ike ịgafe ọtụtụ nsogbu n’ụzọ gị, mana onye meriri ha niile ga-aga nke ọma. Cannotgaghị enwe ike iji ụwa a gbanwee ihe dịka ọ masịrị gị.
Ihe nile bu ka ha tughari dika oge ha si di; Otu ahụ ka ọ dịkwa gị na ndụ gị. Kama ịdọpụ uche gị na ebumnuche na echiche nke ejighi ihe dị n’ihu, ekwesịrị ịkwali gị iru ebe ị na-achọ kemgbe!
O nwere ike iwe obere oge, mana cheta na ọganiihu na-abịa naanị ndị nwere ike ịnagide nsogbu niile mana enweghị nkụda mmụọ. Ihe niile nwere oge ha. Gaghị enwe ike nweta ihe ọ bụla tupu elekere ahụ kụrụ aka nri. Yabụ, nọgide na-eche ruo mgbe oge ruru!
Kwuru edemede kachasị mma n’oge niile
Oge Ihe isi ike
Nọgidenụ na-aga Quotes
Nọgidenụ na-aga Foto
Nọgidenụ na-aga Quotes na mkpali
Kwuru okwu zuru oke
Quotures zuru oke Banyere Ndụ
Oge Oge Zuru Ezu
Amamihe na-ekwu gbasara oge
Ndụ ga-adịrị mfe ma ihichapụ ihe na-adịghị mma na ya. - Amaghi ama
Ndụ anyị bụ otu n'ime onyinye ndị kacha dịrị anyị mma ịnwere. Ọ bụ ọrụ dịịrị anyị idebe…
Mụta ihe site na mmejọ gị bụ ihe amamihe dị na ya, mana imuta ihe site na mmejọ nke ndị ọzọ na-eme ngwa ngwa ma dịkwa mfe. - Amaghi ama
Frommụta ihe site na mmejọ gị bụ ihe amamihe dị na ya, mana imuta ihe site na mmejọ nke ndị ọzọ na-eme ngwa ngwa ma dịkwa mfe. -…
Enwere ụfọdụ ndị na-ewe iwe mgbe niile ma na-achọ ọgụ. Gwaa ije; agha ha na-alụ abụghị gị, ọ bụ onwe ha. - Amaghi ama
Na ndụ, ị ga-ezute ọtụtụ ndị mmadụ na-ewe iwe oge niile,…
Iju doro anya kacha mma mgbe niile karịa nkwa ụgha. - Amaghi ama
Iju doro anya kacha mma mgbe niile karịa nkwa ụgha. - Isi okwu ndi amaghi ama: